မိုနိုပိုလီ - ချားလ်စ် Darrow ခြင်းဖြင့်တီထွင်?
ငါသည်ဤလောက၏ရဲ့အရောင်းဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း၏သမိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ထွက်ထားသောအခါ, ငါ 1936 ဒီအတွက်စတင်မိုနိုပိုလီပတျဝနျးကငျြအငြင်းပွားဖွယ်ရာတစ်ခုလမ်းကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိယခုနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်က Parker ညီအစ်ကိုများချားလ်စ် Darrow ထံမှအခွင့်အရေးများ purchasing ပြီးနောက်Monopoly®မိတ်ဆက်ပေးသည်။
အထွေထွေ Mills ကပျော်စရာ Group မှ, က Parker ညီအစ်ကိုများနှင့်မိုနိုပိုလီဝယ်လက်, 1974 ခုနှစ်တွင်ဒေါက်တာ Ralph Anspach နှင့်သူ၏ဆန့်ကျင်Monopoly®ဂိမ်းဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားစွဲဆိုမှုဆောင်ခဲ့လေ၏။
ထိုအခါ Anspach မိုနိုပိုလီပစ္စုပ္ပန်ပိုင်ရှင်တွေဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်တရားစွဲဆို။ ဒေါက်တာ Anspach ယင်းက Parker ညီအစ်ကိုများ '' ချိုးဖောက်မှုဝတ်စုံကိုဆန့်ကျင်သည်သူ၏ကာကွယ်ရေးကိစ္စတွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေချိန်မှာမိုနိုပိုလီစစ်မှန်တဲ့သမိုင်းတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့များအတွက်အမှန်တကယ်အကြွေးထိုက်တန်ပါတယ်။
ချားလ်စ် Darrow ရဲ့မိုနိုပိုလီများ၏သမိုင်း
Maxine Brady, 1975 အတွက်ဒါဝိဒ်သည် McKay ကုမ္ပဏီထုတ်ဝေသော Hugh Hefner ရဲ့အတ္ထုပတ္တိနဲ့စစ်တုရင်ချန်ပီယံဖရန့် Brady ၏ဇနီးကမိုနိုပိုလီစာအုပ်, မဟာဗျူဟာနှင့် Tactics: သာမန်ဘာသာရပ်အပေါ်အဓိပ္ပါယ်အရင်းအမြစ်စဉ်းစားသည်အဘယ်အရာကိုနေအကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။
Brady ရဲ့စာအုပ် Germantown, Pennsylvania ပြည်နယ်တစ်ခုအလုပ်လက်မဲ့အရောင်းစာရေးနှင့်တီထွင်သူလူနေမှုအဖြစ်ချားလ်စ် Darrow ဖော်ပြသည်။ သူ 1929. Darrow ၏အကြီးအစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှုနောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်သူ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့ထူးဆန်းအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ပါတယ်အတ္တလန္တိတ်စီးတီး, နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိသူ၏နွေရာသီကိုအောကျမေ့နှင့်တဖဲ့နဲ့သူ့ရဲ့မီးဖိုချောင် tablecloth အပေါ်အတ္တလန္တိတ်စီးတီး၏လမ်းများ drawing သည်သူ၏အားလပ်ချိန်ကုန် ပစ္စည်းနှင့်ဒေသခံကုန်သည်များကလှူဒါန်းခဲ့သည်သုတ်ဆေးနှင့်သစ်သား၏ bits သည်။
မကြာခင်မှာပဲမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအိမ်ခြံမြေ Darrow ရဲ့မီးဖိုချောင်စားပွဲပေါ်မှာပတ်ပတ်လည်ထိုင်ပြီးဝယ်ငှားနဲ့ရောင်းဖို့ညစဉ်ညတိုင်းကိုစုဝေးစေ - ပြဇာတ်ပိုက်ဆံကျယ်ပြန့်ခု၏ဖြုန်းပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဂိမ်းအားလုံးအစိတ်အပိုင်း။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာမိမိတို့အနညျးငယျကိုမှန်ကန်ငွေသားနှင့်အတူသူတွေထဲမှာတစ်ဦးအနှစ်သက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါမိတ်ဆွေများကအိမ်မှာကစားရန်ဂိမ်းမိတ္တူချင်တယ်။ အစဉ်အဆက်လက်ခံပေးနိုင်ရန်, Darrow $4ဦးချင်းစီသည်မိမိဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း၏မိတ္တူရောင်းစတင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူသည် Philadelphia တွင်ဌာနစတိုးဆိုင်များမှဂိမ်းပူဇော်ကြ၏။ အမိန့်ချားလ်စ် Darrow ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူမှဂိမ်းရောင်းချမယ့်အစားအပြည့်အဝ-စကေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုသို့သွားရန်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ရှိရာအမှတ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သူကကုမ္ပဏီတစ်ခုအမျိုးသားရေးအခြေခံပေါ်မှာဂိမ်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့လျှင်ကြည့်ဖို့က Parker ညီအစ်ကိုများမှရေးသားခဲ့သည်။ က Parker ညီအစ်ကိုများသည်သူ၏ဂိမ်းပါရှိသောကြောင့်ရှင်းပြ, သူ့ကိုချလှည့် "52 အခြေခံအမှားအယွင်းများ။ " ဒါဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိပ်ရှုပ်ထွေးခဲ့ကြနှင့်ဆုရှင်မရှင်းလင်းသောရည်မှန်းချက်ရှိခဲ့သည်, ကစားရန်ရှည်လျားလွန်းယူခဲ့ပါတယ်။
Darrow ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိမ်းထုတ်လုပ်ဆက်ပြောသည်။ သူဟာ 5000 မိတ္တူထုတ်လုပ်ရန်ပရင်တာသူမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုငှားရမ်းသူမကြာမီ FAO မှ Schwarz တူသောဌာနစတိုးဆိုင်ကနေဖြည့်ဖို့အမိန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တဦးတည်းဖောက်သည်, Sally Barton ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦး - က Parker ညီအစ်ကိုများ '' တည်ထောင်သူဂျော့ခ်ျက Parker ၏သမီး - ဂိမ်းများ၏မိတ္တူကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ သူမသည်မိုနိုပိုလီကြီးဘယ်လောက်ပျော်စရာမစ္စစ် Barton ပြောသည်နှင့်မစ္စစ် Barton ကအကြောင်းသူမ၏ခင်ပွန်းကိုပြောပြကြောင်းအကြံပြု - ရောဘတ် BM Barton, ထို့နောက်က Parker ညီအစ်ကိုများဥက္ကဋ္ဌ။
မစ္စတာ Barton သူ၏ဇနီးမှနားထောင်ပြီးဂိမ်းများ၏မိတ္တူကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
မကြာခင်မှာပဲသူဂိမ်းဝယ်ချားလ်စ် Darrow ကိုရောင်းအားလုံးစုံကိုအပေါ်အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson ပေးဖို့ကမ်းလှမ်း, က Parker ညီအစ်ကိုများ '' နယူးယောက်ရောင်းအားရုံးထဲမှာ Darrow နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစကားပြောရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ Darrow လက်ခံခဲ့သည်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတစ်ခု option ကိုအဖြစ်ကဆက်ပြောသည်ဂိမ်းတိုဗားရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့က Parker ညီအစ်ကိုများခွင့်ပြု။
မိုနိုပိုလီကနေအိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson ချားလ်စ် Darrow တစ်သန်းကြွယ်သူဌေးအစဉ်အမြဲတာငွေရှာဖို့ပထမဦးဆုံးဂိမ်းတီထွင်သူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ နှစ်အနည်းငယ် 1970 ခုနှစ် Darrow ရဲ့သေသောနောက်, အတ္တလန္တိတ်စီးတီးသည်သူ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အထိမ်းအမှတ်ပြားကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာပန်းခြံနေရာများ၏ထောင့်အနီးရှိ Boardwalk အပေါ်ရပ်တည်။
သူတို့ Maxine Brady အားဖြင့်ဖော်ပြထားပါတယ်အဖြစ်မိုနိုပိုလီ-type အမျိုးအစားဂိမ်းကစားပွဲနှင့်မူပိုင်ခွင့်အချို့သည်အစောပိုင်းကဗားရှင်းအတော်လေးဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူကို click ပါဘူး။
ပထမဦးစွာ Lizzie ဂျေမာဂုပညာရှိ, ဗာဂျီးနီးယားကနေ Quaker အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိ၏။ သူမသည် Philadelphia တွင်ဖွားဟင်နရီဂျော့ခ်ျဦးဆောင်သောအခွန်လှုပ်ရှားမှုကိုပိုင်။
အမည်ရအိမ်ရှင် - - ထက်လူအများ၏အများစု, ဥယျာဉ်စောင့်အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုကိုမြေနှင့်အိမ်ခြံမြေများငှားအနည်းငယ်တစ်ဦးချင်းစီအကျိုးကိုပြည်တန်ဖိုးများအတွက်ခဲတညျးရှာတိုးလာထုတ်လုပ်သောသီအိုရီထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဂျော့ခ်ျကဒီထင်ကြေးတားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အလမ်းအားပေးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်, မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုတည်းဖက်ဒရယ်အခွန်အဆိုပြုထား။
Lizzie မာဂုပညာရှိသူမကဂျော့ခ်ျရဲ့စိတ်ကူးများများအတွက်သင်ကြားရေး device ကိုအဖြစ်သုံးစွဲဖို့မျှော်လင့်သော "အိမ်ရှင်ကရဲ့ဂိမ်း" ဟုခေါ်ရသောဂိမ်းကြံစည်။ ဒီဂိမ်းပြန့်ပွားသည့် Quaker နှင့်တစ်ခုတည်းအခွန်၏အကြံပြုချက်ကိုထောက်ခံအားပေးသူများအကြားဘုံ-ရိုးရာ pastime ဂိမ်းအဖြစ်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကူးယူခဲ့သည် အစားသူတို့ဆွဲငင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပျဉ်ပြားခြယ်အဖြစ်အသစ်သောကစားသမားများဟာသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးမြို့လမ်းအမည်များကိုထည့်ခြင်းနှင့်အတူဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒါဟာအသစ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပြောင်းလဲပစ်သို့မဟုတ်ရေးသားဖို့တစ်ဦးချင်းစီသစ်ကိုထုတ်လုပ်သူအဘို့ကိုလည်းဘုံဖြစ်ခဲ့သည်။
အသိုင်းအဝိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းထံမှဂိမ်းပြန့်ပွားသကဲ့သို့, နာမကိုအမှီဖွင့်ရန်, နောက်ဆုံး, ထို့နောက် "လေလံမိုနိုပိုလီ" ရန် "အိမ်ရှင်ကရဲ့ဂိမ်း" မှပြောင်းလဲသွားတယ် "မိုနိုပိုလီ။ "
အိမ်ရှင်ကရဲ့ဂိမ်းနှင့်မိုနိုပိုလီမာဂုပညာရှိရဲ့ဂိမ်းထဲမှာရှိသမျှသောဂုဏ်သတ္တိများကိုသူတို့မိုနိုပိုလီ၌ရှိကြ၏အဖြစ်ဝယ်ယူမရ, ငှားနေကြသည် မှလွဲ. အလွန်ဆင်တူကြသည်။ အဲဒီအစား "ပန်းခြံနေရာ" နှင့်တူသောအမည်များ "Marvin ဥယျာဉ်," မာဂုပညာရှိ "ဆင်းရဲမွဲတေမှုရာဌာန", "လွယ်ကူသောလမ်း" နှင့် "သခင်ဘုရား Blueblood ရဲ့အိမ်ယာကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ " တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်များလည်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ မိုနိုပိုလီမှာစိတ်ကူးဒီတော့လည်းစီးပွားဖြစ်တဦးတည်းကကစားသမားအချမ်းသာဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးမှာတစ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖြစ်လာကြောင်းအိမ်ခြံမြေဝယ်ရောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှင်ကရဲ့ဂိမ်းမှာတော့အရာဝတ္ထုအိမ်ရှင်ကမြေယာ၏ system ကိုအောက်တွင်သည်အခြား Enterprise ကျော်အားသာချက်တစ်ခုရှိခဲ့ပုံကိုသရုပျဖျောဖို့နဲ့တစ်ခုတည်းအခွန်ထင်ကြေးတားနိုင်ပုံကိုပြသနိုင်ဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
မာဂုပညာရှိဇန်နဝါရီလ 5, 1904 တွင်သူမ၏ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းတစ်ခုမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
မိမိအအိပ်ဆောင်အိမ်ထောင်ဖက်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းသူ့ကိုမိတ်ဆက်သည့်အခါဒန် Layman, နှောင်းပိုင်း 1920 ခုနှစ်စာဖတ်ခြင်း, Pennsylvania ပြည်နယ်အတွက်ဝီလျံကောလိပ်မှာကျောင်းသားတစ်ဦး, မိုနိုပိုလီအစောပိုင်းမိတ္တူပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ကောလိပ်ကျောင်းထွက်ခွာပြီးနောက် Layman Indianapolis ၌သူ၏အိမ်သို့ပြန်လာသောနှင့်ဂိမ်းတစ်ခုဗားရှင်းစျေးကွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏အီလက်ထရောနစ်ဓာတ်ခွဲခန်းကိုခေါ်, Inc နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အောက်မှာ Layman များအတွက်ဂိမ်းကိုထုတ်လုပ် "ဘဏ္ဍာရေး။ " Layman Anti-မိုနိုပိုလီတရားစွဲဆိုမှု၌သူ၏အစစ်ခံအတွက်သက်သေခံအဖြစ်:
"ငါသည်မိုနိုပိုလီကအများပြည်သူဒိုမိန်းအတွက်ထို့ကြောင့်ခဲ့ကြောင်း, Indianapolis နှင့်စာဖတ်ခြင်းနှင့် Williamstown, မက်ဆာချူးဆက်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအတိအကျဂိမ်း၏အမည်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သောကွောငျ့ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောရှေ့နေမိတ်ဆွေများထံမှသိနားလည်ကြ၏။ ငါကကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဘူး မည်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါနဲ့တချို့ကာကွယ်မှုရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ပြောင်းလဲသွားတယ်။ "
မိုနိုပိုလီနောက်ထပ်အစောပိုင်းကစားသမား Pete Daggett, Jr. Layman ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအနေဖြင့်ဂိမ်းနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာပြီးနောက် Indianapolis အတွက်ကစားသူကိုကရုသ Hoskins ခဲ့သည်။ Hoskins သူမသည်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းရှိသူမ၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်မိတ်ဆက်ပေးဆက်လက် 1929. အတွက်ကျောင်းကသင်ပေးဖို့အတ္တလန္တိတ်စီးတီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Hoskins ကြောင့်သူမနှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေများကနှောင်းပိုင်းမှ 1930 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးအတ္တလန္တိတ်စီးတီးလမ်းအမည်များနှင့်အတူဂိမ်းတစ်ခုဗားရှင်းကိုဖန်ဆင်းကြောင်းဆိုပါတယ်။
ယူဂျင်းနှင့်ရုသ Raiford Hoskins ၏မိတ်ဆွေများကဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာချားလ်စ်အီး Todd, Germantown, Pennsylvania ပြည်နယ်အတွက်ဟိုတယ်မန်နေဂျာမှဂိမ်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။ Todd ဟိုတယ်တွင်ရံဖန်ရံခါဧည့်သည်များရှိနသောသူချားလ်စ်နှင့်ဧသတာ Darrow, သိသည်။ သူမချားလ်စ် Darrow လက်ထပ်မတိုင်မီဧသတာ Darrow Todd ဘေးတွင်တံခါးကိုနေထိုင်ခဲ့တယ်။
Todd 1931 အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာမလုပ်ပဲ:
"ကျနော်တို့ဒီဂိမ်းသူတို့ကိုလုံးဝသစ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Raifords ထံမှ Darrow နှင့်သူ၏ဇနီး, ဧသတာကြောင့်ခဲ့သည်လေ့လာပြီးနောက်ဖို့ကပထမဦးဆုံးလူတွေသင်ပေးတယ်။ သူတို့ဟာရှေ့မှာနဲ့တူမျှမမြင်စကစိတ်ဝင်စားမှာများစွာသောစာချုပ်ပြသတစ်ခါမျှ။ Darrow ဟုမေး ငါ့ကိုငါစည်းမျဉ်းများနှင့်ဖွင့်ကိုရေးမယ်လို့ငါလုပ်ခဲ့တယ်နှင့်သူတို့လက်ျာဘက်ဖြစ်လျှင်ကြည့်ဖို့ Raiford နှင့်အတူ check လုပ်ထားပါလျှင်ငါ Darrow ကအားပေး၏ - ။ သူကငါပေး၏နှင့် Raiford ပေး. သိမ်းဆည်းထားသည့်စည်းမျဉ်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုမိတ္တူ, လိုခငျြ တချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို။ "
လူးဝစ် Thun ရဲ့မိုနိုပိုလီ
လူးဝစ် Thun, ကစားရန်မည်သို့မည်ပုံဒန် Layman ဆုံးမသွန်သင်သူအိပ်ဆောင်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုလည်းမိုနိုပိုလီ version တစ်ခုတီထွင်မှုကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ Thun ပထမဦးဆုံး 1925 ခုနှစ်ဂိမ်းကစားခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးခြောက်နှစ်အကြာတွင် 1931 ခုနှစ်တွင်သူနဲ့သူ့အစ်ကို Fred သည်၎င်းတို့၏ဗားရှင်းတီထွင်မှုကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့နဲ့ရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ တစ်ဦးကမူပိုင်ခွင့်ရှာဖွေရေး Lizzie မာဂုပညာရှိရဲ့ 1904 မူပိုင်ထင်ရှားနှင့် Thuns '' ရှေ့နေမူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့မသူတို့ကိုအကြံပေးခဲ့သည်။ "မူပိုင်ခွင့်တီထွင်သူအဘို့ဖြစ်ကြပြီးသင်ကတီထွင်ခဲ့ပါဘူး" ဟု၎င်းကပြောသည်။ လူးဝစ်နှင့် Fred သည် Thun ထို့နောက်မူပိုင်ဖို့သူတို့စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သောထူးခြားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
"တစ်ဦးစီးရီး၏ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်စီးရီး၌ရှိသမျှသောဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်နှစ်ဆငှားစုဆောင်းရန်တဦးတည်း entitles ... "
"လူအပေါင်းတို့သည်လေးပိုက်ကွန် $ 150 တစ်ဦးစီးနင်းပိုင်ဆိုင်သည်အထိ $ 10 စီး, နှစ် $ 25 ... တဦးတည်းရထားလမ်းပိုက်ကွန်ပိုင်ဆိုင်။ "
"လူထုရင်ဘတ်ပေါ် alighting မည်သူမဆိုသူလှူဒါန်းပေးစေခြင်းငှါအခွင့်ထူးခံဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်အရာ, အပြာရောင်ကဒ်တဦးတည်းဆွဲသင့်ပါတယ် ... "
"ဘဏ်သို့ $ 50 ပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်, တထောင်သည်သူ၏အလှည့်လှည့်ပတ်သည်နောက်တဖန်ကြွလာပထမဦးဆုံးအကြိမ်စွန့်ခွာလိမ့်မည်။ "
$ 200 စုဆောင်းမ, Go ကိုဖြတ်သွားမ
ငါ့ထံသို့အနည်းဆုံးတစ်ခုကို Darrow မိုနိုပိုလီ၏တီထွင်သူမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်သူကလျင်မြန်စွာမူပိုင်ခွင့်ဂိမ်းက Parker ညီအစ်ကိုများများအတွက်အကောင်းဆုံးရောင်းချသူဖြစ်လာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ 1935 ခုနှစ်တွင် Darrow နဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးတဲ့လအတွင်းမှာပဲက Parker ညီအစ်ကိုများအပတ်တိုင်းဂိမ်း 20000 ကျော်မိတ္တူထုတ်လုပ်စတင်ခဲ့ပြီး - ချားလ်စ် Darrow အခိုင်အမာတဲ့ဂိမ်းကသူ့ခဲ့ "အစီအမံ။ "
က Parker ညီအစ်ကိုများအများဆုံးဖွယ်ရှိ Darrow ထံမှမူပိုင်ခွင့်ဝယ်ယူပြီးနောက်အခြားအမိုနိုပိုလီဂိမ်း၏တည်ရှိမှုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်အချိန်အားဖြင့်ကဂိမ်းကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်ကွောငျးထငျရှားခဲ့သညျ။ က Parker ညီအစ်ကိုများအဆိုအရ၎င်းတို့၏အကောင်းဆုံးအပြောင်းအရွေ့ "မူပိုင်ခွင့်နှင့်မူပိုင်ခွင့် secure ရန်။ " ခဲ့ က Parker ညီအစ်ကိုများဝယ်, တီထွင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေအိမ်ရှင်ကရဲ့ဂိမ်း, ဘဏ္ဍာရေး, Fortune မဂ္ဂဇင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးနှင့် Fortune မဂ္ဂဇင်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Germantown ၏ချားလ်စ် Darrow, Pennsylvania ပြည်နယ်သူအလုပ်လက်မဲ့စဉ်ကိုယ်တော်တိုင်ဖျော်ဖြေဖို့အသစ်တစ်ခုကိုလွှဲဖန်တီးရန်အိမ်ရှင်ကရဲ့ဂိမ်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခဲ့ဆိုပါတယ်။
က Parker ညီအစ်ကိုများ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်ပေးရန်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုယူ:
အဆိုပါကုမ္ပဏီအဘယ်သူမျှမအိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson နဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမဆိုပြောင်းလဲနေစရာမလိုဘဲမူရင်းခေါင်းစဉ်အောက်ရှိအိမ်ရှင်ကရဲ့ဂိမ်းထုတ်လုပ်မယ့်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနှင့်အတူ $ 500 အဘို့အ Lizzie မာဂုပညာရှိရဲ့ဂိမ်းဝယ်ယူခဲ့သည်။ က Parker ညီအစ်ကိုများအိမ်ရှင်ကရဲ့ဂိမ်း၏တရာအနည်းငယ်အစုံပြီးတော့ရပ်တန့်စျေးကွက်။ Lizzie ဂိမ်းကနေအမြတ်အစွန်းအတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်အဓိကကုမ္ပဏီကဖြန့်ဝေကြောင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
က Parker ညီအစ်ကိုများ $ 10000 ဒါဝိဒ်ဒဗလျူ Knapp ကနေဘဏ္ဍာရေးဝယ်ယူခဲ့သည်။ Knapp $ 200 များအတွက်ငွေသား-ခါးဒန် Layman ကနေဂိမ်းယူဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဂိမ်းရိုးရှင်းသောကြောင့်ထုတ်လုပ်ရန်ဆက်ပြောသည်။
က Parker ညီအစ်ကိုများ 1935 ၏နွေဦး၌လူးဝစ် Thun တစ်ဦးအလည်အပတ်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် $ 50 အသီးအသီးအဘို့မိမိတို့မိုနိုပိုလီဂိမ်းမဆိုကျန်ရှိသောပျဉ်ပြားကိုဝယ်ယူရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Thun သူကသူတို့ကိုပြောပြသည်ပြောပါတယ် "ဟုမစ္စတာ Darrow ဂိမ်း၏တီထွင်သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်မှာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါ့ထံသို့မဟုတ်ခဲ့ ... ... ကျနော်တို့ 1925. ကတည်းကကစားချင်ပါတယ်"
အစောပိုင်း 1936 ခုနှစ်, က Parker ညီအစ်ကိုများ Copeland လုပ်. ခေါ်ဂိမ်းတစ်ခုအပေါ်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ကရူ Copeland တရားစွဲ "ငွေကြေးဖောင်းပွမှု။ " Copeland မိုနိုပိုလီအပေါ် Darrow ရဲ့ထို့ကြောင့်က Parker ညီအစ်ကိုများ '' မူပိုင်ခွင့်မှားနေသည်ကြောင်းအားသွင်း, ဒီတရားစွဲဆိုမှု။ အဆိုပါကိစ္စတွင်တရားရုံးထဲကအခြေချခဲ့သည်။ က Parker ညီအစ်ကိုများ $ 10000 များအတွက် Copeland ရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖို့အခွင့်အရေးများဝယ်ယူခဲ့သည်။
အဆိုပါ snowman ၏တီထှငျခဲ့
အဘယ်သူသည် Velcro တီထွင်?
အဆိုပါမူးယစ်ဆေး Krokodil ၏သမိုင်း
USC Beaufort အဆင့်လက်ခံရေး
Epenthesis (သမ်မာကမျြးအသံ) ၏အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ
အဘယ်အရာကိုက Sketch ဆွဲပါဖို့ဆိုလိုသနညျး
လျက်ဇိုလာ Budd ခရီးစဉ်မာရိသည်နှစ်ထပ်ခဲ့သလား အိုလံပစ်အဝေးသင်အငြင်းပွားမှုပြေး
ရီးရဲလ်နှင့် Unreal အခြေအနေအရ Form ကိုသင်ထောက်ကူ
နယူးပုဂံခေါင်းဆောင်များ9သိကောင်းစရာများ
လူအားလုံးတို့သည်ရိုးရာ Revival အကြောင်း
Tarot 101: တစ်ဦးကအခြေခံပညာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ရန်သူအနေဖြင့် Angie ရဲ့ Escape
'' Lo '' များအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောအသုံးပြုခြင်း
ကိုယ်ရေးနဲ့ Mary ဂဒလမာ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ယရှေု၏အမျိုးသမီးတပည့်
ရေနံပန်းချီ: solvent နှင့်ဗဓေလသစ်
သစ်ပင်အစားထိုး Shock က Minimize